Ihe ịsụ ngọngọ na ịma onwe onye
1. Ịsọ ngọngọ n’ịma onwe onye
Ihe ndị a na-esochi bụ ụfọdụ ihe juru ebe nile na-eme ka mmadụ sụọ ngọngọ nke na-abịa n’ụzọ nke ịmụ banyere onwe ya.
Achọghị imeziwanye onwe ya ka mmadụ: Ụfọdụ mmadụ enweghị ebumnuche imeziwanye. Nke a nwere ike ịbụ n’ihi ntụpọ nke omume dịka mpako ma ọ bụ umengwụ.
Enweghị akparamagwa nke mmụta: Onye na-enweghị mmasị ịmụ ihe banyere ihe ndị o mejọrọ na otu ọ ga-esi agbazị ha.
Echemighị echiche ime: N’ọnọdụ a ịbụ onye ewepụrụ onwe ya pụọ pụtara enweghị ikike ịnọ chemie echiche n’ọnọdụ ndụ. Ka anyị were ihe atụ atọ ahụ site na isi akwụkwọ bu ụzọ wee hụ ihe akparamagwa ichemi-echiche ga-abụ ma atụle ya na akparamagwa echemighị echiche.
ọmụmaatụ Echemighị echiche Ichemi-echiche ma ọ bụ itinye uche n’ihe
Annette Gịnị mere onye isi m anaghị eto m? Ana m arụsikwa ọrụ ike. Kedu udi agwa ọma onye otu ibe m m nwere ike isi mụta?
Raul Enweghị m nnwere onwe m n’ụlọ a. Ekwesịrị m ịpụ. Papa enweela ezigbo ogologo ụbọchị. Kedu ka m ga-esi mee ka obi ruo ya ala? Kedu ihe mere a ga-eji gwa m otu ihe ugboro ugboro – ebee ka m enweghị?
Mark Ruth dị ka nwunye m. Ndị nwunye niile bụ otu. Mụ na Jeremy ga-apụ ga-ṅụọ mmanya biya. Ọ bụrụ na mnwere ike ịhụ onwe m na Jeremy, mgbe ahụ abụ m nọọ onye umengwụ, Achọrọ m imeziwanye na mpaghara a.
Mgbe itulechara ihe atụ ahụ ndị dị n’elu, mmadụ ga-aghọta ihe mere eji ekwu na,“Ndị na-egbu oge ha naanị ịchọ mmejọ na ndị ọzọ anaghị enwekarị oge iji dozie nke ha”
Onwe onye dị elu: Ndị mmadụ nwere onwe onye dị elu n’ụzọ niile anaghị ekweta mmejọ nke ha mere, ma ya fọdụ imezi onwe ha.
Ihe ime mmụọ: Enwere ọtụtụ ụdị ihe ime mmụọ na-akpata nsogbu na ndụ anyị. Ọtụtụ oge ndị mmadụ na-agabiga ihe mgbu n’ihi ihe omume akara aka, mmetụta nke ike adịghị mma, nsogbu ndị nna nna ochie nwụrụ anwụ na-eweta, mgbochi ike dị mkpa, na ndị ọzọ ga. Oge ụfọdụ n’ihi akara aka dị oke njọ mmadụ nwere ike anaghị eche echiche nke ọma ya mere nke a na-abụ ọgbatauhie na ịgba mbọ iji mata onwe onye karịa. Ọzọkwa ike adịghị mma sitere na mpaghara ime mmụọ nwere ike ịnọchi echiche mmadụ ma bawanye ntụpọ omume mmadụ. Na akụkụ nke ọzọ, bụladị nghọta na ụdị nsogbu dị ma nwee ike inye anyị ihe mgbu na-enyere anyị aka iji were nkọwa karịa na-ahụta ndụ. N’ezie,nnukwu ihe omume niile na ndụ mmadụ – mma ma ọ bụ njọ – bụ karịrị n’ihi akara aka.
Otu onye na-achọnụ nke ihe metụtara n’ihe mberede ụgbọ ala nke abụghị mmejọ ya, nwere mmetụta ime mmụọ na otu akụkụ akara aka ya emezuola. O nwere mmetụta n’oge ndụ ya gara aga, na ọ ga-abụrịrị na o mejọrọ onye nke ọzọ, ya mere na ndụ a onye nke ọzọ emejọla ya. Site n’echiche a, ọ kwụsiri ike ma na-ebi ndụ ya kwa ụbọchị nwayọ.
Anyị kwesiri imụrụ anya banyere ihe mgbochi ndị na-egbochi ikike anyị iji mata ntụpọ omume anyị.
Ọbụnadị ntakịrị ihe mmeghe nke ndị ọzọ rụtụrụ aka kwesịrị ilebara anya nke ukwuu dị ka ihe dị mkpa n’ihi na ọ nwere ike iduga kpughe ihe ndị ọzọ dị omimi na ụdị mmadụ anyị bụ.
Inwe mmeghachi omume na nzaghachi ndị ọzọ maka anyị bụ ihe ịrịba ama nke nnukwu mpako nke onwe.